Inkqubo yokuvelisa, i-Diesel Generator Set-Walter
UWalter okhethekileyo kwimveliso yeeDiesel Generator Sets yoMhlaba noLwandle. Injini yeBrand: Cummins, Perkins, Volvo, MTU, Daewoo, Deutz, Brand yasekhaya: Yuchai, SDEC, Weichai ...
Cwaka Uhlobo lweCummins Generator Sets
Vula iiSetter Generator Sets
Cwaka Uhlobo lwePerkins Generator Sets
Ubume beMveliso kunye neApplicaton
Iisetter zeWalter Generator zingasetyenziselwa iMizi-mveliso, ezoRhwebo, zoKwakha, ukuWelding, iZitishi zoNxibelelwano, iMikhosi, iZibhedlele, iMigodi, iSikhululo seenqwelomoya kunye nezinye iiNdawo zoLuntu.
60HZ 570kva Perkins injini yedizili
60HZ 440kva Perkins injini yedizili
60HZ 1250kva Perkins injini yedizili
IWALTER GROUP IFROFILE
UWalter njengokwenza iiseti zejenereyitha zedizili, sinamava emveliso atyebileyo. Umzi-mveliso kaWalter wawukhule ngo-2003, sikhethekileyo kwi-generator efayilishwe ngaphezulu kweminyaka eli-16. UWalter uliqabane le-OEM likaPerkins, iCummins, iDoosan, i-MTU, iVolvo kunye nokunye, kunye namandla avela ku-5kw-3000kw.
Umzi-mveliso waseWalter ubekwe eYangzhou, kwiphondo laseJiangsu, China. Indawo yefektri ingaphezulu kwe-2500 yemitha yesikwere kwaye ixhotyiswe ngezixhobo eziphambili kubandakanya umatshini wokusika we-laser, umatshini wokubetha we-CNC ..
Ithagethi kaWalter: Ukuseka iNew Innovation kunye neQela lokuFunda, Ukubonelela ngeeMveliso zeNgcali neeNkonzo zaBathengi beHlabathi ngokuqhubekayo.
Ukusetyenziswa kweesethi zethu zeJenereyitha zeDizili. Apha uya kubona igalari yemifanekiso kunye neevidiyo ukufumana inkuthazo yomsebenzi wakho olandelayo.